को हुन् अम्बिका गुरुङ ? कसरी गीतसंगीतमा लागि परिन ? के भन्छिन गीतसंगीतको बारेमा ? — Motivate News
को हुन् अम्बिका गुरुङ ? कसरी गीतसंगीतमा लागि परिन ? के भन्छिन गीतसंगीतको बारेमा ?
Posted on November 21, 2017 by Ghanshyam Shrestha
काठमाडौँ – गीतकार तथा साहित्यकार अम्बिका गुरुङ सौम्य, भद्र, समाजसेवी भावनाकी धनी र मिलनसार व्यक्ति हुनुहुन्छ । विगत दुई दशक अघिदेखि अमेरिकामा बस्दै आउनुभएकी गीतकार अम्विका गुरुङका शब्दहरु आजकल निकै गुञ्जन थालेका छन् । गुरुङद्धारा रचना गरिएका माया प्रेम देखि लिएर देशभक्ति समेत गरि करिव १ सय भन्दा बढि गीतहरु रेकर्ड भैसकेका छन् । जसलाई नेपालका चर्चित गायक गायिकाले स्वरवद्ध गरेका छन् भने श्रोताद्धारा अत्याधिक रुचाईएका छन् ।
उहाँलाई सानै उमेरदेखि गीत संगीत भनेपछि खुब मन पथ्र्यो । उहाँ नेपालमा हुँदा पनि कविता र गीति कथा लेख्ने गर्नु हुन्थ्यो र उनले लेखेको गीति कथा रेडियो नेपालबाट प्रसारण हुन्थ्यो । उहाँ भन्नु हुन्छ – खास गरेर म गीत लेख्ने मान्छे हैन, गीत गाउँन मन लाग्ने मान्छे चाहि हुँ तर पारिवारिक कारण गीत गाउन सकिएन ।
साहित्यकार गुरुङ कबिता संगसंगै कथा पनि लेख्नुहुन्छ, उहाँको सन २०१५ सालमा ‘भाव सागर भाग १’ र लगतै सन २०१६ सालमा ‘भावसागर भाग २’ गरी २ वटा गीति एल्बम पनि निकालिसकेका छन् । अहिले उनको लगभग १०० भन्दा बढि गीत रेकर्ड भईसकेका छन् ।
गुरुङ भन्नुहुन्छ – ‘गीत संगीत मैले सेलिब्रेटि कहलिनका लागि, अर्थोपार्जनका लागि गीत लेखेको हैन आत्मसन्तुष्टिका लागि लेखेको हुँ । यदि सबैले मेरो गीत म्यूजिक भिडियो मन पराइदिनु भो भने र मेरो कम्पनीले पैसा कमायो भने त्यो पैसाले सामाजिक काम गरेर समाज सेवा गर्नेछु’ । उनले नयाँ गायकगायिका र र संगीतकारलाई प्राथमिकता दिनु हुन्छ । गीतसंगीत संगसंगै उहाँ समाजसेवामा पनि उत्तिकै अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ । उनको भाव सागर इन्टरटेनमेन्ट एल.एल.सी नाम गरेको अमेरिकामा कम्पनी पनि रहेको छ । उहाँको श्रीमान् र एक छोरा हुनुहुन्छ ।
गुरुङको व्यस्त समयका बीच पनि अलिकति फुर्सद मिल्यो कि दुई लाईन भए पनि गीत,कविता अथवा भावाना कोर्ने बानी रहेको छ । अर्को कुरा उनलाई आफ्नै गीतमा गुनगुनाउने बानी छ । उहाँ भन्नु हुन्छ – ‘हरेक राम्रो ठाउँ वा राम्रो बस्तुको अघि मेरा लागि शब्दहरु यसै निस्किन्छन् । अलि वढि प्रेम गीतहरु फुर्ने गर्छन् । गीत लेखन गर्ने कुरा मेरा लागि सजिलै विषय हो । किनकि म शब्दहरुसंगै बढि खेल्ने गर्छु ।’
गीतकार गुरुङको बिचारमा गीत संगीत भनेको एउटा मनोरन्जनको साधान हो गीत संगीतले मान्छेलाई आनन्द दिन्छ । थाकेको छ भने मान्छेको थकान मेट्छ र संगीतले मान्छेको दिमागलाई ध्यानाआकर्षण गराउछ । उनी भन्छिन – ‘गीत संगीतमा सत्यता हुनु पर्छ । संगीत भनेको यस्तो चिज हो संसारमा बच्चादेखि बुढापाका सम्मलाई मन पर्ने हुदाँ जसले पनि सुन्छन् । यसले समाजलाई फाइदा पनि हुन्छ र संगीतलाई न्याय दिलाउनको लागि त गीतकार, संगीतकार र गायक कै ठुलो भूमिका हुन्छ यि नै तीन वटा क्षेत्रका कलाकार मिलेर मात्र गीतमा मिठास हुन्छ ।’
गुरुङ हाल अमेरिकामा हुनुहुन्छ । उहाँ भन्नु हुन्छ – ‘म जहाँ गए पनि आफ्नो माया बाँड्न मन लाग्छ । मान्छे सबै एउटै हो जस्तो लाग्छ । त्यसैले म जहा रहे पनि सबको प्यारो छु । भाग्यमानी छु, सबले मलाइ माया गर्छन् । त्यो भन्दा बेसी म अरु अपेक्षा पनि गर्दीन र म आफ्नो परिवारलाई पनि धेरै माया गर्छु । परिवारको पनि प्यारो छु र प्रवासिनु चाही रहर नभएर बाध्यता थियो ।’
गीतकार अम्बिका गुरुङको बारेमा यति लेखेसी आज उहाँको एक बिशेष दिन जन्म दिन रहेको कुरा पनि जोड्न मन लाग्यो गुरुङ आजबाट ६० औ वसन्त पार गर्नु भएको छ । जन्मदिनको सुखद घडीमा नेपाली शब्दकोशमा रहेका सम्पूर्ण शुभकामनारुपी शब्दहरुको पुष्पगुच्छा … पाईलाहरुले सफलताको शिखर चुमी रहोस, फलोस फुलोस यही छ भावसागर टिम चाहना, जन्म दिनको उपलक्ष्यमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना ।